Realme C2: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida rasmiga ah | Androidsis
Realme, sumadda hoosaad ee OPPO, maahan nooc caan ah oo looga yaqaan suuqa Yurub. In kasta oo shirkaddu ay nooga tagtay taleefannno badan bilooyinkan. Mid ka mid ah waa 3 Pro, kaas oo isna la soo bandhigay 22-ka Abriil. Intaa waxaa dheer, astaanta ayaa sidoo kale naga tagaysa taleefankeeda cusub ee heerka gelitaanka. Kani waa Realme C2, oo horeyba loo soo bandhigay.
Qaabkan yimaado sida casriga ah fudud, laakiin diyaar u ah inay dagaal ku bixiso qaybtan dhamaadka-dhamaadka ah ee Android. In kasta oo ay u badan tahay in Realme C2 aan laga bilaabi doonin adduunka, haddii aan tixgelinno bilawga caadiga ah ee sumadda Shiinaha ee suuqa.
Telefoonkan casriga ah waxaan ka helaynaa waxyaabo badan oo aan hadda ku aragno Android. Shaashad leh shaashad u eg qaab dhibic biyo ah, oo cabirkeedu ka badan yahay 6 inji, marka lagu daro kamarad gadaal laba-laabeysa, iyo kuwo kale. Marka waa guul u soo hoyatay astaanta Shiinaha.
1 Tilmaamaha Realme C2
Tilmaamaha Realme C2
Shirkadu way cadahay lama waxa hadda ku jira moodada marka la samaynayo taleefankan. Wax shaki la'aan ka dhigaya inay u muuqato ikhtiyaar aad u tartan badan oo tixgelin la siinayo dukaamada. Gaar ahaan tan Realme C2 waxay la timid qiimo weyn oo lacag ah, taas oo aad muhiim ugu ah kiiskaaga. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen: 6,1 injiin oo leh xallinta HD
Gacaliye: Helio P22
Kaydinta Gudaha: 16GB / 32GB (la ballaarin karo illaa 256GB oo leh micro SD)
Cámara trasera: 13 Xildhibaan + 2 Xildhibaan
Kaameerada hore: 5 Xildhibaan
Xuduudaha kala duwan: Dual SIM, Bluetooth, GPS, LTE / 4G, WiFi 802.11
kuwa kale: Furitaanka wajiga
Gaar ahaan waa wax lala yaabo in lagu arko shaashad sidan u ballaadhan oo ku jirta heerkan hoose. Maaddaama ay caadi tahay in noocyada ku qoran Android isticmaal shaashado yar yar qalabka rakhiis, maaddaama ay ku dhacdo noocyo sida Xiaomi. Laakiin kiiskan, soo saaraha Shiinaha wuxuu rabay inuu sharad ku dhigo mid ka weyn, taas oo shaki la'aan u oggolaaneysa khibrad adeegsi wanaagsan oo macaamiisha doonaya inay iibsadaan. Shaashadan waxaan ku haynaa qaanso u dhiganta hal dhibic biyo ah, halkaasoo dareeraha hore uu yaalo. Dareere aan sidoo kale ku leenahay furitaanka wajiga.
In kasta oo Realme C2-kan aynaan ku lahayn dareeraha faraha. Waa wax caan ku ah noocyo badan inay ka takhalusaan dareeraha faraha ee heerkan hoose, laakiin inay leeyihiin furitaanka wejiga. Waa kiiska qaabkan nooca Shiinaha ah. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay kamarad laba gadaal ah oo taleefanka ah, taas oo shaki la'aan ah mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan. Sidoo kale batteriga, oo leh awood wanaagsan oo ah 4.000 Mah, oo sidaas darteed u ballan qaadaya ismaamul wanaagsan dadka isticmaala. Intaa waxaa dheer, waxay horeyba ula timid Android Pie, taas oo war wanaagsan u ah kuwa xiiseynaya taleefanka.
Bilowga Realme C2-kan ayaa la xaqiijiyay hadda oo keliya Hindiya. Dalka gudihiisa, waxaa si rasmi ah looga bilaabi doonaa 15-ka bisha May, sida ay shirkaddu ilaa hadda xaqiijisay. Laakiin waqtigan la joogo wax intaa ka badan lama oga oo ku saabsan bilaabitaankeeda suuqa caalamiga ah. Waxaan rajeyneynaa war ku saabsan arrintan goor dhow, in kastoo ay u badan tahay inay sii joogi doonto oo keliya Aasiya.
Waxaan helnaa laba nooc oo taleefankan ah, oo ku saabsan RAM iyo keydinta, sidaan soo aragnay. Labada nooc ayaa laga sii dayn doonaa dalka Hindiya 15-ka May. Isticmaalayaasha doonaya inay iibsadaan, waxay kala dooran karaan labada midab: buluug iyo madow. Ikhtiyaarro yar oo arrintan la xiriira. Qiimaha nooc kasta waa:
Realme C2 oo leh 2/16 GB waxay lahaan doontaa qiimo dhan 5.999 rupees (oo qiyaastii ah 76 euro isbedelka)
Nooca leh 3/32 GB waxaa lagu bilaabi doonaa qiimo dhan 7.999 rupees (qiyaastii 103 euro si loo beddelo)
Maxaad u maleyneysaa noocyadan cusub ee soo galitaanka sumadda? Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan suurtagalnimada bilaabista caalamiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme C2: Nooc cusub oo nooc heer-gal ah